Sekureva kwemukuru weApple, iyo Siri Remote nyowani haidi kuve mune yekutsvaga app nekuti hatizoirasa | IPhone nhau
Apple yakatanga Apple Apple yekupedzisira Keynote, chishandiso chitsva chinotsiva yapfuura Apple TV uye icho chinotiunzira zvimwe zvekuwedzera sekuvandudza mukushanda kwayo uye eARC nyowani iyo inotibvumidza isu kuve nezvimwe zviwanikwa zvakabatana neterevhizheni. Uye zvakare, zvinotiunzirawo Siri Remote nyowani inoita kunge isinga gutsikane ... Iye zvino mutevedzeri wemutungamiriri wekushambadzira anotsanangura zvikanganiso zveiyi nyowani Siri Remote.
Vanoda kuziva kutaura zvishoma, vangadai vakataura zvakasiyana asi kwete, sekureva Zvataurwa naTim Twerdahl paMobileSyrup, iyo Siri Remote nyowani haidi tekinoroji iyo inoitendera kuti ive mukati mekutsvaga app. nekuti iri gobvu kupfuura yapfuura modhi uye izvo zvinoita kuti zvive zvakaoma kuirasa. Chikonzero kubva kumaneja uyu, asi zvese zvinofanirwa kutaurwa, Pane chero munhu anoda Siri Remote kuti aoneke muKutsvaga app kuti tikwanise kuiwana mukati meimba yedu? Iwe unorasikirwa neakawanda matongero mumba mako?
Muchidimbu, kumwe kukakavadzana kweSiri Remote nyowani. Vazhinji vaitarisira zvakawanda kubva kuiyi nyowani yekudzivirira kure yeApple TV asi zvinoita sekunge zvese zvinoramba zviri mumabhatani matsva anotibvumidza kudzora terevhizheni yedu, chimwe chinhu chichauya chaizvo asi chisingazopokana chinoita kuti tifunge kutenga iyi nyowani Siri Remote kana isu tine Apple TV yechinyakare uye hatidi kuenda kuburikidza nepombi kuti titenge iyo nyowani. Nezve kurishandisa seyemutambo wevhidhiyo mutambo, Twedahl akataura zvakare kuti Apple inokurudzira chakazvipira mutambo wekutamba senge PlayStation kana Xbox macomputer.. Zvinonyadzisa pasina kupokana kuti Apple haina kutora mukana weichi chishandiso, Apple TV isingangovhura ivo kuve nevashandisi vazhinji kunyoreswa kuApple TV + kana Apple Music, chishandiso chakanakira Apple Arcade iyo yavari kupaza kwete chete nekuda kwekirabhu yebasa kana zvisiri zvakare nemukuru mutungamiriri weApple TV.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » appletv » Sekureva kwemukuru weApple, iyo Siri Remote nyowani haidi kuve mune yekutsvaga app nekuti hatizoirasa
Apple TV app yeXbox inogamuchira rutsigiro rweDolby Vision